Waddooyinka Muqdisho qaarkood oo xiran | KEYDMEDIA ONLINE
Jawiga magaalada Muqdisho ayaa saakay ka duwan maalmihii lasoo dhaafay, waxaana la dareemayaa xaalad umuuqata in muran siyaasadeedkii aan wax guul ah laga gaarin!
MUQDISHO, Soomaaliya - Waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho qaar kamida ayaa saakay xiran, iyadoo koontaroolada qaar lasoo dhoobay ciidan gaashaaman kuwaasoo wata gawaarida dagaalka ee aadka u waaweyn.
Jidadka qaar ee Muqdisho gaar ahaan kuwa gala Villa Soomaaliya ayaa la xiray, lana dhigay ciidamo tiro badan, tallaabadani waxay imaaneysaa xilli Golaha Shacabka BJFS uu maanta yeelanayo kulan ay walaac xooggan ka muujiyeen Madasha Badbaado Qaran iyo xubnaha wakiilada beesha caalamka.
Fadhiga maanta ee Golaha ayaa baaqday laba jeer oo hore iyadoo maalintii koowaad ee fadhiga uu buuq hareeyay, ugu dambeyntiina lagu kala dareeray iyadoo guddoonka golaha shacabka uu mas'uuliyadda baaqashada kulankaas dusha ka saaray 15 xildhibaan kuwaasoo laga joojiyay fadhiyada golaha shacabka.
Fadhigii labaad ee kulanka golaha ee muranka iyo xasaasiyadda dhaliyay ayaa isna la iclaamiyay maalintii Isniinta, wuxuuna baaqday mar kale iyadoo cadaadis xoog leh uu ka yimid xubnaha Beesha Caalamka oo ugu dambeyn lagu qanciyay guddoomiye Mursal.
Dhaqdhaqaaqyada amni ee laga dareemayo magaalada Muqdisho ayaa sabab u ah arrinta muranka dhalisay ee la xiriirta Ajandaha Covid-19 ka lagu hoos qariyay muddo kororsiga.